Guardiola Oo Ka Hadlay Isbadalka Uu Ku Sameeyay Shaxda Man City: 'Waxaan Sameeyay Waxa Noogu Fiican'
HomeWararka CiyaarahaGuardiola oo ka hadlay isbadalka uu ku sameeyay Shaxda Man City: ‘Waxaan sameeyay waxa noogu fiican’
Guardiola oo ka hadlay isbadalka uu ku sameeyay Shaxda Man City: ‘Waxaan sameeyay waxa noogu fiican’
May 30, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada 0
Pep Guardiola ayaa difaacay go’aankiisa uu ku bedelay taatikada Manchester City ee finalka Champions League ee ay la ciyaarayaan Chelsea, isagoo ku adkeysanaya in kooxdiisa “ay ahaayeen kuwo cajiib ah qeybtii labaad” inkastoo looga badiyay 1-0.
Kai Havertz ayaa dhaliyay goolka guusha ee Chelsea iyadoo Thomas Tuchel uu ka guuleystay Guardiola markii seddexaad xilli ciyaareedkan ka dib markii uu bedelay Frank Lampard bishii Janaayo.
Guardiola ayaa go’aansaday shaxdiisa weerarka iyadoo Ilkay Gundogan uu ciyaarayo booska qadka dhexe iyadoo Fernandinho iyo Rodri ay keydka fadhiyeen.
“Waxaan go’aansaday go’aanka inaan helo ciyaartoy tayo leh,” ayuu yiri Guardiola ciyaarta ka dib.
Wuxuu yiri: “Waxaan go’aansaday go’aanka, inaan helo ciyaartoy tayo leh. Gundogan wuxuu ku ciyaaray sanado badan booskan lakin isbadal ayaa ku sameeyay.
“Inaad heysato ciyaartoy xawaare, leh oo yar-yar, tayada, ciyaartoyda cajiibka ah, gudaha, dhexda iyo khadadka waa muhiim.